पानीको संकट टार्न बर्षाको पानी
केही बर्ष पहिला मात्र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको बिश्व जल प्रतिबेदनमा बढ्दो जल संकटका बिषयमा निकै गम्भीर चिन्ता जाहेर गरिएको थियो । त्यसमा भनिए अनुसार कृषिको बढ्दो जल आवश्यकता, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा उपभोग, प्रदुषण तथा जल ब्यवस्थापनमा देखा परेका कमजोरीहरुका कारण स्वच्छ पिउने पानीमाथि अत्याधिक दबाव बढिरहेको छ ।त्यो प्रतिबेदनले उल्लेख गरे अनुसार बिश्वका कतिपय देशहरुमा जल संकट तीब्ररुपमा बढिरहेको छ र ती देशले गम्भीर पानी संकटको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा पानीको बर्वादीलाई रोकिएन भने यो समस्याले बिश्वमा भयंकर बिकराल रुप लिने खतरा टड्कारो छ । कयौ देशले भू-जल स्तर घट्न जाँदा पानीको ठूलो संकट भोग्नु परिरहेको कुरा समेत प्रकाशमा आइरहेका छन् । हुन त आज पनि बिश्वमा उपलब्ध कूल जलको मात्रा त्यत्ति नै छ जति दुइ हजार बर्षपहिला थियो । अन्तर कति मात्र छ भने त्यतिबेला जनसंख्या आजको तुलनामा केवल तीन प्रतिशत थियो । १९४७ मा प्रति ब्यत्ति सुरक्षित पिउने पानी ६ हजा घन मिटर प्रतिब्यक्ति उपलब्ध थियो ।त्यो घटेर २००० सालमा आइपुग्दा केवल २३०० घन मिटर मात्र रहन गयो । आउदो २०२५ सम्मा यो अझ घटेर १६०० घन मिटर प्रतिब्यक्ति पुग्न जाने देखिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थाको अनुमानका अनुसार आउदो बीस बर्षा हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पानीको माग ५० प्रतिशतले बढ्ने छ । भारतमा अहिले उपलब्ध जलमध्ये ९० प्रतिशत उपयोग कृषि उत्पादनमा गर्ने गरिन्छ । जसमा खाद्य उत्पादनको अनुपात ३५ प्रतिशत रहेको छ । यदि कृषि उत्पादनमा समुचित जल निकासी तथा जल उपयोगको बैज्ञानिक उपाय अबलम्बन गरियो भने पनि केवल २० प्रतिशतसम्म मात्र जलको बचत हुन सक्तछ । बिज्ञान र प्रबिधिको निक्कै प्रगति गरेको भए पनि अहिलेको बढ्दो जल संकटबाट मुक्त हुनका लागि पुराना उपायहरुलाई पनि प्रयुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो तरीका भनेको घरको छानाबाट खस्ने बर्षाको पानी संकलन गर्ने उपाय हो । सामान्यतः सय बर्गको मिटर आकारको छानाबाट ६,५००० लिटर बर्षाको पानी एकत्र गर्न सकिने देखाएको छ । जसबाट चार सदस्य भएको एउटा परिवारका लागि पिउने पानी र अन्य घरेलु आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि १६० दिनसम्म पुग्नसक्छ ।
नेपाल जस्तो जलश्रोतको धनी देशले पनि राजधानीमा नै जुन पिउने पानीको संकट बर्षौंदेखि बहोरिइरहेको छ त्यो समस्या समाधान गर्न बर्षाको पानी एकत्र गर्ने उपाय गर्न गराउन सकेमा कम्तिमा मेलम्ची पानी परियोजना सम्पन्न भएर पानी बितरण नहुञ्जेलसम्म त काम दिन्थ्यो कि ? सरकारले जनताले बर्षाको पानी जम्मा (रेन वाटर हार्भेस्टिङ्ग)गर्ने यो उपायको अबलम्बन गर्न आवश्यक सुबिधा प्रदान गरे कसो होला ?संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको बिश्व जल प्रतिबेदनमा बढ्दो जल संकटका बिषयमा निकै गम्भीर चिन्ता जाहेर गरिएको थियो । त्यसमा भनिए अनुसार कृषिको बढ्दो जल आवश्यकता, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा उपभोग, प्रदुषण तथा जल ब्यवस्थापनमा देखा परेका कमजोरीहरुका कारण स्वच्छ पिउने पानीमाथि दबाव बढिरहेको छ ।त्यो प्रतिबेदनले उल्लेख गरे अनुसार बिश्वका कतिपय देशहरुमा जल संकट तीब्ररुपमा बढिरहेको छ र ती देशले गम्भीर पानी संकटको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा पानीको बर्वादीलाई रोकिएन भने यो समस्याले बिश्वमा भयंकर बिकराल रुप लिने खतरा टड्कारो छ । कयौ देशले भू-जल स्तर घट्न जाँदा पानीको ठूलो संकट भोग्नु परिरहेको कुरा समेत प्रकाशमा आइरहेका छन् । हुन त आज पनि बिश्वमा उपलब्ध कूल जलको मात्रा त्यत्ति नै छ जति दुइ हजार बर्षपहिला थियो । अन्तर कति मात्र छ भने त्यतिबेला जनसंख्या आजको तुलनामा केवल तीन प्रतिशत थियो । १९४७ मा प्रति ब्यत्ति सुरक्षित पिउने पानी ६ हजा घन मिटर प्रतिब्यक्ति उपलब्ध थियो ।त्यो घटेर २००० सालमा आइपुग्न केवल २३०० घन मिटर मात्र रहन गयो । आउदो २०२५ सम्मा यो अझ घटेर १६०० घन मिटर प्रतिब्यक्ति पुग्न जाने देखिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थाको अनुमानका अनुसार आउदो बीस बर्षा हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पानीको माग ५० प्रतिशतले बढ्ने छ । भारतमा अहिले उपलब्ध जलमध्ये ९० प्रतिशत उपयोग कृषि उत्पादनमा गर्ने गरिन्छ । जसमा खाद्य उत्पादनको अनुपात ३५ प्रतिशत रहेको छ । यदि कृषि उत्पादनमा समुचित जल निकासी तथा जल उपयोगको बैज्ञानिक उपाय अबलम्बन गरियो भने पनि केवल २० प्रतिशतसम्म मात्र जलको बचत हुन सक्तछ । बिज्ञान र प्रबिधिको निक्कै प्रगति गरेको भए पनि अहिलेको बढ्दो जल संकटबाट मुक्त हुनका लागि पुराना उपायहरुलाई पनि प्रयुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो तरीका भनेको घरको छानाबाट खस्ने बर्षाको पानी संकलन गर्ने उपाय हो । सामान्यतः सय बर्गको मिटर आकारको छानाबाट ६,५००० लिटर बर्षाको पानी एकत्र गर्न सकिने देखाएको छ । जसबाट चार सदस्य भएको एउटा परिवारका लागि पिउने पानी र अन्य घरेलु आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि १६० दिनसम्म पुग्नसक्छ । नेपाल जस्तो जलश्रोतको धनी देशले पनि राजधानीमा नै जुन पिउने पानीको संकट बर्षौंदेखि बहोरिइरहेको छ त्यो समस्या समाधान गर्न बर्षाको पानी एकत्र गर्ने उपाय गर्न गराउन सकेन कम्तिमा मेलम्ची पानी परियोजना सम्पन्न भएर पानी बितरण नहुञ्जेलसम्म त काम दिन्थ्यो कि ? सरकारले जनताले बर्षाको पानी जम्मा (रेन वाटर हार्भेस्टिङ्ग)गर्ने यो उपायको अबलम्बन गर्न आवश्यक सुबिधा प्रदान गरे कसो होला ?